'समर लभ'ले अतित शर्माको हत्या गर्यो! | Jukson
'समर लभ'ले अतित शर्माको हत्या गर्यो!
‘समर लभ’ किताबमा पढियो। ‘समर लभ’ रेडियोमा बाचन पनि गरियो। अन्ततः ‘समर लभ’ काँचको पर्दामा पनि हेरियो। यो जुनीमा मैले यी तीनवटै कर्ममार्फत् महशुस गरेको प्रिय कृति हो– ‘समर लभ'। त्यसैले मेरो लागि 'समर लभ' सविशेष कथा हो।
यहाँहरुले प्रश्न स्वभावतः सोध्न सक्नु हुन्छ। मज्जा केमा आयो- पढ्दा, वाचन गर्दा वा हेर्दा? मज्जा केमा आएन? कि सबैमा आयो? कि कुनैमा पनि आएन?
प्रत्येक कमा, अर्धविराम र पूर्णविराम मलाई याद छ पुस्तक 'समर लभ' को । याद नै हुन्- तकलिफ दिने। यादकै वाणमा खेपिएर मृत्यु कुर्ने भीष्म हो मान्छे।
यो समीक्षा तकलिफहरूको सन्दुस बनी जाओस् ! म चाहन्न।
यस धरतीमा यस्ता कैयन् अप्ठेरा पाठक, श्रोता र दर्शक हुन्छन् जसलाई केहीमा पनि मज्जा नआउन सक्छ। यस्ता कैयन् सजिला पाठक, श्रोता र दर्शक पनि हुन्छन् जसलाई सबैमा उस्तै मज्जा आई दिन्छ। कोही कोही त यस्ता पनि हुन्छन् जसलाई आफ्नो साथीको मुखबाट फिल्मको कथा सुन्दा आनन्द लाग्छ तर त्यही फिल्मलाई हलमै पुगेर हेर्न बस्दा भने हरामी निद्रा लाग्छ ।
अक्षर र आवाजले बाँधिने व्यक्तिलाई दृश्यले पनि बाँध्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । दृश्यले बाँधिने व्यक्तिलाई अक्षर र आवाजले पनि बाँध्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । हप्तामा एउटा फिल्म स–परिवार हलमा गएर हेर्ने बानी नपरेका नेपाली समाजमा फिल्मको उद्योग चलाउनु आँफैमा एउटा पुरुषार्थ हो । खगेन्द्र श्रेष्ठ र इन्दु भण्डारीले एउटा उद्यम गरेँ, कोही बात छैन!
हामीसँग फिल्म हेर्न संस्कृतीकै विकास भएको छैन। हामी उल्टै काँचको पर्दामा बलिवुडलाई समेत टक्कर दिने खालको कथा, प्रविधी र कलाकार खोज्छौँ। यो हामी नेपालीले पालेको हरामी चाहना हो। पर्दामा दामी चिज खोज्ने हामी हरामी दर्शक हौँ। यस्तो दर्शक गण विश्वको अर्को कुनामा विरलै भेटिएला!
तर, हामीसँग फिल्म हेर्ने संस्कृति, आवश्यक प्रविधी र कुशल कलाकार भएनन् भन्दैमा आलटाल गरी 'यति गरेपछि नेपालमा चली हाल्छ' भनेर यदि निर्देशकले हृलचक्रयाइँ गर्छ भने त्यो मान्य छैन । र, त्यो दरिद्र मानसिकता जब दर्शकले पर्दामा पात्र, दृश्य र संवादमार्फत् महशुस गर्छन् तब एउटा महँगो सजायको कठघरामा 'निर्देशक एण्ड कम्पनि' उभिनै पर्छ। आरोप सुन्नै पर्छ। फैसला स्वीकार्नै पर्छ।
मैले प्यार गरेर पढेको उपन्यास 'समर लभ' को मुख्य पात्र अतीत शर्मा हो। ऊ अतित गुरुङ होईन। ऊ अतीत लामा पनि होइन। ऊ अतीत मगर पनि होइन। अरूजस्तै म पनि हलसम्म अतित शर्मालाई हेर्न गएको हो। यो हाम्रो भूल होइन।
सामान्य ब्राह्मण परिवारको अतीत शर्मालाई मँगोलियन चेहराको अतीत बनाएर प्रस्तुत गर्ने अधिकार निर्देशक मुस्कान ढकाललाई कसले दियो? त्यस्तो रोलमा अतीत बनेर खेल्ने रहर आशिष पियाले किन गरे ? नव कलाकार आशिषले 'समर लभ' एक्कै पटक भए पनि किन पढेनन्? यदि पढेको हो भने पनि आफ्नो सुन्दर चकलेटी मंगोलियन अनुहार ऐनामा एक पटक किन हेरेनन् ?
कास्टिङ डाइरेक्टरले अतीत शर्माको हत्या गरेको छ। 'समर लभ'का दर्शकले फिल्ममा अतीत शर्मालाई भेट्दैनन्। पहिलो गासमा ढुंगा लाग्छ। थप चटनी, पापड र सेबाईले ढुंगा बिर्साउन सक्दैन।
डाइरेक्टर सरले कथा पढ्नु पर्दैन ? पढेकै भए पनि नबुझेको कुरा सोध्नु पर्दैन ? बोलाए पनि सुनिने कपनको हाइटमा बस्ने लेखक सुबिन भट्टराईलाई उसको पात्रसँग भेट गराउनु पर्दैन ? यदि यसमा सुबिनकै सहमती हो भने पनि फिल्म त सुबिनको होइन, मुस्कानको हो । जिम्मेवार बन्नु पर्दैन ? जे पनि गरिदिने ? हैट !
सगरमाथा चढ्ने शेर्पाहरूको कथामा सुरबीर पण्डित र राजाराम पौडेलहरूलाई भारी बोकाएर उकालो चढायो भने फिल्म कस्तो बन्ला ? दिलीप रायमाझीको ठाउँमा दयाहाङ राईलाई राखेर ' आदिकवि भानुभक्त' को रिमेक बनाइयो भने कस्तो बन्ला ? कसैले पृथ्वी नारायण शाहको फिल्म बनाउँदा बिसे नगर्चीको भूमिकामा नीर शाह वा राजेश हमालको साइज, स्वरुप र हाइटको व्यक्तिलाई उभ्याइ दियो भने फिल्म कस्तो भई जाला ?
फिल्ममा जे देखाए पनि हुँदैन। हामी 'महँगो प्रविधी' छैन भनेर रुन्छौँ। तर प्रविधी होइन, हाम्रो प्रवृत्ती हेरौँ त! प्रवृत्तीमा हामी झन् कंगाल छौँ।
'समर लभ'को अतीत शर्मा एउटा सामान्य परिवारको व्यक्ति हो। फिल्ममा अतित शर्माले दर्जनौँ कोट फेरेको देखाईएको छ। यस्तो लाग्छ ऊ शहरको फेसनेवल केटा हो । उसँग नपुग्ने केही छैन।
फिल्मभित्र फिल्म हेर्न गएको एउटा दृश्य छ। साथीहरूसहित अतित शर्मा फिल्म हलमा एउटा ड्रेस लगाएर ठाँटिएर जान्छ, हलबाट बाहिर निस्कँदा ऊ अर्को ड्रेसमा ठाँटिएको फर्केको देखाइएको छ।
अर्को दृश्यमा बिहेको लागि मन्दीरमा जाँदा उनले लगाएको कोट मन्दीरबाट फर्केर कोठामा पुग्दा बदलिन्छ।
ग्लामरको नाउँमा पात्रको पात्रता नबुझी ठाउँ न कुठाउँ कपडामात्रै बदल्ने आइडिया कसले निकाल्यो ? हेरिन्जेल उदेक लाग्छ।
एउटा सामान्य परिवारको अतीत शर्मालाई फेसनवेल र ड्रेस कन्सस अतीत बनाउनु जरुरी थिएन। ड्रेस बदल्ने टाइम लाइन नभएको बखतमा समेत त्यसो गरिनु भनेको हेलचक्रयाँई नै हो।
'समर लभ' कि साया शाक्य जस्ती छिन् लगभग त्यस्तै भूमिकामा उतार्न सफल छन् निर्देशक मुस्कान ढकाल। तर उनी अतीत शर्माको कास्टिङ सेलेक्सनमा बेस्सरी चुकेका छन्।
समर लभ मुलत अतीत शर्माकै कथा हाे। लेखकले उपन्यास लेख्दा अतीत शर्माकै प्वाइन्ट अफ भ्यूबाट लेखेका छन्। सामान्य चरित्रलाई फिल्मका निर्देशकले बेवास्ता गरेर जस्ताे गरि देखाईदिए पनि पचाउन सकिन्थ्याे हाेला। तर अतीत शर्माकाे चरित्रमा आशिष पियालाई फिल्ममा हेरेर निस्केपछि जतिसुकै कडा हाजमाेला खाएपनि पचाउन सकिन्न, अहँ।
कथाको माग अनुसार अतितलाई जुंगा र दाह्री समेत भाडामा खरिद्नु परेको पीडा यसरी पोखिएको छि आम दर्शकले कुर्सीमा बसेर नै 'फिल' गर्छन्। नेपाली फिल्ममा कथाअनुसारको पात्र चयनमा यतिसाह्रो दु:ख छ भन्ने तथ्य यही फिल्मले देखाएको छ। आर्यन चेहरा खोजेर पाईएनछ नेपाली संसारमा। हरि ॐ!
यति धेरै कच्चपना र हेलचक्रयाइँका बाबजुद पनि फिल्मको कथाले दर्शकलाई बाँधेर राखेको तथ्यलाई नकार्न मिल्दैन। कथा नै फिल्मको नायक हो। कथाले नै खिच्छ दर्शकको ध्यान। उपन्यास नपढेका दर्शकलाई अझ बढि खिचेर राख्छ।
मानकृष्ण श्रेष्ठ र संजय लामाको सिनेम्याटोग्राफी सुन्दर छ। पुष्पन प्रधानको संगीतमा कुनै खोट छैन। रोमान्टिक र स्याड सबै गीत मखमली छन्।
साया शाक्यको रोलमा नवनायिका रेवती क्षेत्री जति जमेकी छन्, त्यत्तिकै जमेकी छन् सुश्मिताको रोलमा रहेकी कलाकार नम्रता सापकोटा। यस्तो लाग्छ- कथाको लयलाई यी दुवैले गहिराइँमा पुगेर समातेका छन्। 'समर लभ' साया र सुस्मिताको कथा होइन, अतित शर्माको कथा हो। मुख्य पात्रलाई कमजोर, अमिल्दो र नौरंगी बनाएर देखाएपछि अरु पात्र जतिसुकै स्वभाविक र मौलिक भए पनि फिल्म फिक्का बन्छ। तथापि नव नायक आशिष पियाले सक्दो प्रयास गरेको देखिन्छ। उनीबाट भविष्यमा आशा गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ। तर उनले कथा राम्ररी पढेनन् र मिल्दो पात्रमा आफूलाई उभ्याएनन् भने उनको करियरमा बर्बादीको वर्षा हुनेछ।
पुस्तकका अक्षरलाई पर्दामा उतार्नु अवश्य पनि सजिलो काम होइन। प्रकाशित आख्यानमाथि बनाइने फिल्मलाई 'सिनेम्याटिक ट्रान्सलेसन' मानिन्छ। आख्यानमा उल्लेखित घटना, संवाद र दृष्य सबै समेट्दैमा फिल्म राम्रो बन्दैन। कथा राम्रो हुँदैमा पनि फिल्म राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन। यदि त्यसो हुन्थ्यो भने विश्वमा प्रसिद्धी कमाएका सबै आख्यानमाथि फिल्म बनाउने र ती सबै फिल्म हिट हुने ट्रेण्ड चल्थ्यो। कथा मुटु हो। 'मुटु' लाई मात्रै शरीर ठान्नू भूल हो।
महेश भण्डारीलाई ट्विटरमा फलो गर्नुस : https://twitter.com/MaheshhBhandari
दुई हिरोइनले सार्वजनिक गरे निश्चलको ‘फर्गो’
साउदी पत्रकार खशोग्जी हत्याका टेप सुन्नै नसकिने निकै “पीडादायी र हिंसात्मक” – ट्रम्प
सिण्डिकेट तोड्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध सार्वजनिक यातायत बन्द
पोखरामा अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर हुँदै
अक्षय को ‘टोइलेट’ सार्वजनिक